Imenyu yeKrisimesi ngokuchasene nengxaki, iiresiphi ezingabizi kakhulu zeKrisimesi | Ukupheka kweKhitshi
Imenyu yeKrisimesi ngokuchasene nengxaki
Ngezi ntsuku zeKrisimesi xa usapho lonke luhlala luhlangana kunye, kubalulekile ukulungelelanisa iimenyu kuhlahlo-lwabiwo mali. Kungenxa yoko ukusukela ngoko Ukupheka zokupheka sikuzisa iingcebiso ezithile ze Imenyu yeKrisimesi ngokuchasene nengxaki izitya ezingabizi kakhulu kunye nokucebisa.
Ukulungisa izitya zethu siya kuthi ukutya ukutya okubiza imali eninzi (ukutya kwaselwandle, imvana, isirloin) yokutya okungabizi kakhulu (inkukhu, inyama yehagu, ihake, ikhowudi). Kukwabaluleke kakhulu ukuthenga ukutya esikufuna ukukutya kwangaphambi kwexesha kwaye sikwenze kube ngumkhenkce kuba ngeentsuku zeKrisimesi zonke iimveliso zinyuka ngexabiso zisenza ukutya kwethu kweKrisimesi kubize kakhulu.
Kubalulekile ukuba uthathe ixesha lakho kwi ukuhonjiswa kwezitya zakho. Iya kwenza iindwendwe ukuba zixabise yonke imigudu kwaye zinike ngakumbi ukujonga iKrisimesi ekutyeni.
Imenyu yeKrisimesi ngokuchasene nengxaki- Ukupheka zokupheka
Isaladi ngeeshizi kunye nama-walnuts
Ukuxubana kwamakhowe kunye neeproni
I-spaghetti enenkukhu kunye netumato yendalo
Iitshokholethi yasekhaya kunye ne-almond nougat
Ukugqiba isidlo sangokuhlwa, ungalibali ukubhiyozela nomnye wethu u-sorbets kwaye uyangcangcazela.
El eyona nto ibalulekileyo Ke zonke iiresiphi zigqibelele luthando esilubekayo ekwenzeni kwabo. Ke ngoku uyazi, ukubeka uthando oluninzi kwiitya zakho, ngokuqinisekileyo ziya kuba zilungele wena.
kwiimenu, Iiresiphi zeKrisimesi
Igama lam ndinguYesica Gonzalez kwaye ukupheka yenye yezinto endizithandayo. Amaxesha ngamaxesha ndiza kuyeka ngale bhlog kukushiya kwezinye zeendlela zam zokupheka ... Jonga iprofayile>
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » ngokubanzi » kwiimenu » Imenyu yeKrisimesi ngokuchasene nengxaki
Iimbambo ezigcadiweyo kunye nevumba le-basil, limnandi kwaye kulula kakhulu ukuzilungiselela
Isaladi enemibala emininzi, isidlo sasemini kunye ne-pasta esempilweni kakhulu